5 tillaabo lagu Abuurayo Istaraatiijiyada Kobaca ee Dhabta Shaqeeya | BehMaster
Bogga ugu weyn/E-commerce/5 tillaabooyinka lagu Abuurayo Istaraatiijiyad Kobac oo Dhab ahaantii shaqeysa
5 tillaabooyinka lagu Abuurayo Istaraatiijiyad Kobac oo Dhab ahaantii shaqeysa
Kobcinta ganacsigu waa adag tahay. Haddi aad tahay milkiile meherad yar, xubin koox suuqgeyn ah, ama wakaalad, fuulista rollercoaster of high and lows ma aha caqabad yar. Waxa xataa ka sii adag in la dejiyo rajooyin hammi leh oo haddana xaqiiqo ah oo ku saabsan waxa la heli karo.
Tani waa sababta istaraatiijiyadda kobaca ay muhiimadda ugu weyn u leedahay ganacsiyada. Hagahan, waxaan ku dabooli doonaa waxa ay tahay istaraatijiyad korriin, sida ay uga duwan tahay istiraatijiyadda suuq-geynta, iyo sababta ay u shaqeyso—oo wata tusaalooyin badan. Waxa kale oo aan kugu socon doonaa habka shanta tallaabo ee abuurista istaraatijiyad kobaca ganacsigaaga. Shanta tallaabo waa:
Deji yoolalkaaga heerka sare
Aqoonso waxa aad geliso iyo waxa ka soo baxa
Samee tijaabooyinka koritaanka
Xaqiiji tijaabooyinkaaga korriinka
Kobcinta isla xisaabtanka xad dhaafka ah
Dhamaadka hagahan, waxaad awoodi doontaa inaad aqoonsato yoolalka la dejinayo iyo waxa looga baahan yahay kooxdaada si loo gaadho yoolalkaas. Diyaar ma u tahay inaad ganacsi joogto ah u wado, la saadaalin karo, laga yaabee xitaa kobaca qarxa? Akhriso.
Maxaa dhab ah is istiraatiijiyad korriin?
Waxa jira jahawareer badan oo ka jira adduunka suuq-geynta oo ku saabsan waxa ay tahay istaraatijiyad suuq-geyneed korriin iyo sida ay uga duwan tahay istiraatijiyadda suuq-geynta.
Waxyaabaha ugu horreeya marka hore, istaraatijiyad korriintu maaha qorshe suuqgeyneed. Sidoo kale macnaheedu maaha iibsashada xayeysiisyada PPC, wadista taraafikada SEO, ama ku socodsiinta imtixaanada CRO ee boggaaga. Kuwani waa suuqgeyn xeeladaha kaas oo hoos yimaada qorshahaaga suuqgeyneed.
Istaraatiijiyada kobacaadu waa khariidadda sawirka weyn ee aad abuurtay si aad ganacsigaaga uga hesho halka uu hadda joogo una gaadho meesha uu rabo mustaqbalka. Tani waxay ka dhigan tahay in:
Ku lug leh dhammaan waaxyaha shirkadda (oo ka dhanka ah suuq-geynta oo keliya).
Waxaa loogu talagalay in lagu kobciyo shirkadda dhinacyo badan (dakhliga, shaqaalaha, iwm).
Waxay koobaysaa istaraatiijiyadaada suuqgeyneed (oo aan ahayn si kale).
Isku soo wada duuboo, istaraatijiyad korriintu waa istaraatijiyad heer sare ah oo qeexaysa wax kasta oo ganacsigu u baahan yahay inuu sameeyo si uu u kobco. Waa hab dhammaystiran oo cilmiyaysan oo loo wado koritaanka.
Istaraatiijiyad korriintu maaha qorshe suuqgeyneed. Waa istaraatijiyad heer sare ah oo qeexaysa wax kasta oo ganacsigu u baahan yahay inuu sameeyo si uu ugu kordho hab dhamaystiran oo cilmiyaysan.
Halkan waxaa ah tusaale istaraatijiyad kobac ah oo loogu talagalay shirkad mala awaal ah "Startup Masters," kaas oo aan u isticmaali doono tusaale ahaan inta lagu jiro habka shanta tallaabo:
Xeeladaha korriinka miyay shaqeeyaan?
Way adkaan kartaa in la fahmo fikradda abuurista qorshe dhab ah, oo la fulin karo oo ah shay la siman “koritaanka” ka dibna la arko natiijooyin la taaban karo—laakin ma aha oo kaliya suurtagal; way shaqeysaa! Xeeladaha kobaca ayaa ah maraqa sirta ah ee ka dambeeya kobaca joogtada ah ee qaar ka mid ah shirkadaha ugu waaweyn aduunka sida DropBox, Dollar Shave Club, WhatsApp, iyo in ka badan.
Xeeladaha kobaca ayaa ah maraqa sirta ah ee ka dambeeya kobaca joogtada ah ee qaar ka mid ah shirkadaha ugu waaweyn aduunka sida DropBox, Dollar Shave Club, WhatsApp, iyo in ka badan.
Dhab ahaantii, istaraatiijiyad korriin oo si wanaagsan loo qeexay shirkaddayda Venngage, ayaa horseeday:
3-laab ayaa kordhay taraafikada blog-ga hal sano ka yar.
40,000+ diiwangelin todobaadkii (marka la barbardhigo 400 dib 2016).
150% YOY kobaca 5tii sano ee la soo dhaafay.
Hadda oo aad ogtahay waxa ay tahay istaraatijiyad korriin (oo aan ahayn) oo aad aragtay caddayn la taaban karo oo ku saabsan awoodda ay u leedahay in ay kobciso kobaca ganacsiga - waa waqtigii qaybta madadaalada: abuurista istaraatijiyad korriin adiga kuu gaar ah.
Habka 5-talaabo ee lagu abuurayo istaraatijiyad korriin adiga kuu gaar ah
Habka aad ula imanayso istaraatijiyad koboc ganacsi oo dhan waxay dareemi kartaa xad dhaaf. Waxaa jira wax badan oo ganacsi gala oo qeexaya guushiisa, xagee ka bilaabataa? Ha ka welwelin. Waxa aan u kala jabiyay habkaaga abuurista istiraatijiyadda kobaca shan tilaabo oo cad.
Tallaabada #1: Deji yoolalkaaga heerka sare ah
Kobaca ganacsigu wuxuu la mid yahay qorsheynta safarka. Aad bay u fududahay markaad ogaato meesha ugu dambeysa.
Haddii aad saadaalin karto inta dakhli ee ganacsigaaga cusub uu samayn doono mustaqbalka fog ka hor inta aanad bilaabin, miyaanay taasi kaa caawinayn inaad ogaato istaraatiijiyada korriinka ee ugu fiican si aad halkaas u gaadho?
Xariiqda hoose ayaa ah, waxaa aad waxtar u leh in la bilaabo dhamaadka ka dibna dib loo shaqeeyo (oo lid ku ah).
Way ka sii faa'iido badan tahay inaad bilawdo dhamaadka ka dibna dib u shaqeyso.
Haddaba aan u gudubno dhammaadka istaraatijiyadaada korriinka. Tani waa halka aad dejisay yoolal hammi heer sare ah balse xaqiiqo ah (waa dheelitirnaan jilicsan). Macallinka ganacsiga Jim Collins wuxuu ugu yeeraa BHAGs, ama "Himilooyin waaweyn, timo badan, dhiirran."
Ex-Hubspot VP ee Kobaca, Brian Balfour, waxa uu u tixraacaa sida Kor-Down Habka:
Venngage, waxaan ugu yeernaa "heer sare" ama "Himilooyinka muddada dheer". Markaa tillaabada koowaad, billow khariidaynta yoolka muddada-dheer sida yoolkaaga 10-sano ah. Si taas loo sameeyo, is weydii su'aalaha soo socda:
Halkeed ku aragtaa naftaada iyo shirkaddaada wakhtigaas?
Intee in le'eg ayay tahay inaad kobciso ganacsigaaga?
Intee in le'eg ayaad filaysaa in shirkaddaadu ay soo saarto?
Immisa shaqaale ayaad u aragtaa in aad leedahay?
Aan dib u eegno istiraatijiyadda kobaca tusaalaha aan hore ula wadaagay. Waa kuwan waxa yoolka mala-awaalka ah ee tobanka sano ah, iyo tillaabooyinka loo baahan yahay si loo gaaro yoolka la sheegay, ay u ekaan doonaan StartUp Masters:
Dib u shaqaynta, waxay noqonaysaa mid sahlan in la dejiyo yoolalka dhabta ah iyo ujeedooyinka halka ay shirkadu u baahan doonto in ay ahaato shan sano, saddex sano iyo hal sano si ay u gaarto yoolkaas tobanka sano ah. Xitaa waxaad ku bilaabi kartaa wax yar sida yoolka shanta sano ee mala-awaalka ah, kaas oo kaa caawin doona inaad dejiso yoolalka afar, saddex, laba, iyo halka sano ah.
Markaad dib u shaqeyso, way sahlanaan doontaa inaad dejiso yoolal dhab ah oo hal sano, seddex sano ah, iyo shan sano ah ganacsigaaga si ay kaaga caawiyaan inaad ku sii socoto wadada.
Hadda oo aad qeexday yoolalkaaga heerka sare ah, waa waqtigii qaybta waxqabadka ee istaraatiijiyadaada kobaca - tillaabooyinka aad u baahan doonto inaad qaado si aad u gaarto yoolalkaas.
Talaabada #2: Aqoonso waxa aad geliso iyo waxa ka soo baxa
Markaad dejiso yoolalkaaga heerka sarreeya, tallaabada xigta waa inaad go'aamiso tilmaamayaasha waxqabadkaaga muhiimka ah (KPIs). Hadafka kasta oo aad dejiso, waxaa muhiim ah in la aqoonsado cabbirada muhiimka ah iyo natiijooyinka kaa caawin doona inaad cabbirto inaad u socoto jidka aad ku dhufatay yoolalkaaga. Waa kan sida loo sameeyo:
Go'aami Xiddiga Waqooyiga
Mid ka mid ah cabbirada ugu horreeya ee ay tahay inaad aqoonsato waa mitirka Xiddigta Waqooyi. Waxa kale oo loo yaqaannaa, "Hal Metric That Matters (OMTM)." Halbeeggani waa tirada sida ugu wanaagsan u matalaysa qiimaha ay macaamiishu ka helaan alaabtaada. Halkan waxaa ah muqaal sharraxaad waxtar leh oo uu sameeyay Alex oo ka socda faa'iidooyinka shabakadda:
Tusaale ahaan, Airbnb's North Star metric waa tirada habeen ee ballansan. Waa maxay sababtu? Sababtoo ah waxay tilmaan cad u tahay qiimaha badeecadooda. Habeenada badan ee la ballansan yahay, fursadaha sare waa in macaamiishu ay khibrad wanaagsan ka helayaan Airbnb waxayna u badan tahay inay ku soo noqdaan si ay u ballansadaan joogitaankooda xiga. Maskaxda ku hay, mitirka North Star ee aad dooratay waa inuu xiriir toos ah la yeesho dakhliga iyo yoolalka haynta ee shirkaddaada.
Miisaanka North Star ee aad dooratay waa inuu xiriir toos ah la yeeshaa dakhliga iyo yoolalka haynta ee shirkaddaada.
Waa kuwan tusaalooyin kale oo dheeraad ah oo ku saabsan cabbirada North Star:
Qiimaha nolosha macmiilka (ganacsatada ecommerce)
Dakhliga soo noqnoqda ee bishii (loogu talagalay ganacsiyada B2B SaaS)
Wadarta wakhtiga daawashada (ganacsatada warbaahinta)
Markaad doorato mitirkaaga, talaabada xigta waa inaad qiyaasto sida aad hadda wax ugu qabato mitirkaas. Aynu ka soo qaadno inaad bilowday adeeg cusub oo qulqulka ah sida Netflix. Waxaad u dooratay "waqtiga guud ee daawashada" inuu yahay cabbirka North Star. Waxaad dooratay cabbirkan sababtoo ah marka la eego falanqayntaada, wakhtiga daawashada sare waxay la xidhiidhaa haynta sare (taasoo keentay dakhli badan).
Aynu ka soo qaadno isticmaalayaashu inay ku qaataan ku dhawaad ​​30 daqiiqo maalintii daawashada bandhigyada adeeggaaga. Tani waa sida aad hadda wax ugu qabanayso mitirka North Star. Waa guntaada. Mid ka mid ah yoolalka heerka sare ah ee aad dejisay ayaa ah inaad kordhiso sii haynta 30% 12ka bilood ee soo socda. Si loo gaadho yoolkan, miyaanay macno samaynayn in diiradda la saaro wadarta wakhtiga daawashada isticmaale kasta?
Gunta hoose: Ogow sida aad hadda wax ugu qabanayso mitirka Xiddigta Waqooyi iyo inta ay le'eg tahay tiradaas ayaa u baahan doonta inay beddesho si ay u saamayso yoolalkaaga heerka sare ah.
OCRs waxay u taagan yihiin Natiijooyinka Muhiimka ah ee Ujeeddada. Waxay tixraacayaan cabbirro gaar ah oo aad la socon doonto kuwaas oo saamayn doona yoolalkaaga heerka sare ah. Bilawga software-ka, aasaasayaal badan ayaa raacaya qaabka AARRR ee dejinta OKRs. Tani waxay u taagan tahay Qaadashada, Hawlgelinta, Haysashada, Dakhliga, iyo Gudbinta.
Waxay noqon kartaa wax culus in la saameeyo mid kasta oo ka mid ah cabbiradan. Markaa, annagoo adeegsanayna tusaalaha shirkadda aan ku bilownay xagga sare ("StartUp Masters"), waxaan diiradda saari doonnaa soo iibsiga iyo sii-haynta hadda.
Waa kuwan iibsiyada OCRs ee la aqoonsaday intii lagu jiray tusaalaha qorsheynta kobaca Masters-ka ee Bilowga:
StartupMasters waxay rabta in ay saameyn ku yeelato iibsiga ugu horrayn iyada oo loo marayo yoolalkooda taraafikada ee dabiiciga ah iyo lacagta la bixiyo. Hadafka? Cabbir taraafikada dabiiciga ah 130,000 iyo taraafikada ay bixiyaan 70,000 booqde bishii.
Haddii aad eegto agabka, waxa jira bogag badan oo wado taraafikada. Waxay kaloo qeexeen taraafikada looga baahan yahay qaybaha kala duwan ee goobtooda si ay u saameeyaan OCR-gooda:
Markaad sii waddo inaad u kala qaybiso yoolalkaaga qaybo yaryar oo gaar ah, waxaad si fudud kuugu fududaynaysaa inaad gaadho yoolalka hamiga ah ee aad naftaada u dejisay. Oo markaad gaarto yoolalkaas, waxaad arki kartaa qorshahaaga korriinka run ahaantii shaqeeya.
Oo marka aad dejinayso OKR-yada, ogow cabbirrada aad ku maamuli karto miisaan ka yar kaas oo yeelan doona awood weyn. Markaad sii wadato garashada agabyada saameeya OCRs kaaga, billow inaad ka fikirto tijaabooyin aad ku ordi karto si aad u saamayso gelintaada.
Markaad sii waddo inaad u kala qaybiso yoolalkaaga qaybo yaryar oo gaar ah, waxaad si fudud kuugu fududaynaysaa inaad gaadho yoolalka hamiga ah ee aad naftaada u dejisay—oo arag istaraatiijiyadaada kobaca oo shaqaynaysa.
Tallaabada #3: Samee tijaabooyinka koritaanka
La imaanshaha tijaabooyin qiimo leh oo lagu ordo ma fududa sida ay u muuqato. Dabin caadi ah oo shirkaduhu ku dhacaan marka ay hirgeliyaan sifooyin wax soo saar cusub ama fikradaha suuqgeyntu waa biyo-dhac. Biyo-dhaciddu waxay dhacdaa marka kooxdu ay sii waddo inay ku kordhiso shuruudaha mashruuca, ilaa heerka wakhtiga loo baahan yahay si loo hirgeliyo uu sii kordhayo, oo la mid ah baaxadda gurguurta.
Natiijo ahaan, wixii la rabay in la hirgeliyo dhowr toddobaad gudahood hadda waxay ku dhammaanayaan bilo. Si taas looga fogaado, waxaan kugula talin lahaa inaad ku qalanto hal-ama laba toddobaad oo cadence ah. Waxa aad taas samayn kartaa adiga oo u kala jejebiya mashaariicda waaweyn imtixaannada ugu yar ee la hirgelin karo ama MVTs. MVTs, waxaad si dhakhso leh u heli kartaa fikrado qiimo leh oo aad ku xaqiijin kartaa in mashruuc ballaaran uu mudan yahay in la daba galo.
Imtixaanada ugu yar ee la hirgalin karo (MVTs), waxaad si dhakhso leh u heli kartaa fikrado qiimo leh oo aad ku xaqiijin kartaa in mashruuc balaadhan uu mudan yahay in la daba galo.
Ku billow go'aaminta OKR aad isku dayayso inaad saameyn ku yeelato. Tusaalaha istaraatiijiyada kobaca Masters-ka ee bilowga ah, waxaan isku dayeynaa inaan kordhino sii haynta 10%:
Galinta? Ku riix isticmaaleyaal badan si ay u dhamaystiraan hal mashruuc oo kale seddex toddobaad gudahood. Si ay u saameeyaan mitirkan, hal tijaabo oo ay ku ordi karaan waa in ay abuuraan qaab soo baxay gudaha dashboardka mashruuca oo riixaya isticmaalayaasha si ay u bilaabaan mashruuc cusub marka ay garaacaan 80% calaamadda dhamaystirka.
Waxay sidoo kale qiyaaseen natiijada tijaabadan iyo dadaalka ay koox kasta u baahan tahay si ay u dhacdo. Kahor intaadan raacin tijaabo ama tijaabo weyn ama mid yar, ku dhex mari jaantuskan socodka si aad u ogaatid haddii aad u sii burburin karto MVT-yar:
Hadafkaagu marka aad qorsheyneyso MVTs waa inaad socodsiiso tijaabooyin u baahan dadaal hoose, laakiin leh wax soo saar sare. Kuwani waa "slam-dunks" sababtoo ah waxaad heleysaa guulo waaweyn waqti yar gudahood.
Hadafkaagu marka aad qorsheyneyso MVTs waa inaad sameyso tijaabooyin u baahan dadaal hoose laakiin leh wax soo saar sare.
Dhab ahaantii, tijaabo kastaa ma noqon doonto "slam-dunk" laakiin haddii aad ka fogaan karto "turtles" (tijaabooyin dadaal sare ah iyo wax soo saar hooseeya), waxaad halkaas ku jirtaa kala badh:
Shaxda uu sameeyay Venngage
Halkan waxaa ah tusaale tijaabo korriin oo si wanaagsan loo diiwaangeliyay, ixtiraamka leh Clearbit.
Talaabada 4: Xaqiiji tijaabadaada korriinka
Mararka qaarkood, jebinta tijaabada MVT weli kuma filna in la xaqiijiyo in imtixaanku u qalmo in lagu daro istaraatiijiyadaada kobaca.
Hadda waxaad u baahan tahay inaad go'aamiso haddii tijaabadani ay saameyn togan ku yeelan doonto macaamiishaada. Ka dib, shaqadaada suuqgeyn ahaan sidoo kale waxay ka kooban tahay bixinta khibrad macmiil oo weyn.
Waa kuwan liiska hubinta hubinta tijaabada muuqaalka ah oo aad isticmaali karto si aad si adag ugu xaqiijiso tijaabooyinkaaga:
Waxaad samayn kartaa wax la mid ah adiga oo ku qoraya tijaabooyinkaaga (iyo meelaha tixgelinta) ee Google Doc ama kaarka Trello.
Istaraatiijiyada kobaca ee StartupMasters waxay raacdaa qaabka "Shaqooyinka La Qabanayo", kaas oo diiradda saaraya yoolalka macmiilka suurtagalka ah, halkii ay diiradda saari lahaayeen kaliya qofka ay yihiin.
Liiskan hubinta, waxaad ku arki kartaa "Shaqooyinka La Qabanayo" ee kala duwan ee liiska lagu qoray. StartupMasters sidoo kale waxay u tixgelisaa qofka inuu yahay arrin muhiim ah sida ay u qorsheynayaan tijaabadooda.
Sida aan hore u tilmaamay, tixgalinta kale ee muhiimka ah waxaa ka mid ah suurtogalnimada guusha, dadaalka loo baahan yahay koox kasta, iyo OKR ay saamaysay tijaabadan.
Marka kooxdaadu ay bilowdo nidaamkan, laba shay ayaa dhacaya:
Kooxdaadu way u fududaanaysaa inay tixgeliso dhammaan qaybaha muhiimka ah.
Waxaad hubinaysaa in kooxdaadu ay mudnaanta siinayaan tijaabooyinka ugu rajo-gelinta badan.
Google Docs iyo Airtable waa aaladaha doorashada ee habka tijaabinta koritaanka HubSpot. Venngage, waxaan u isticmaalnaa Trello qorsheynta sprints-ka toddobaadlaha ah, iyo Google Docs si loo ansixiyo tijaabooyinkeena korriinka-kuwaasi oo fudud oo ku filan shirkad kasta oo cabbir kasta (ay ku jirto kaaga) inay isticmaasho.
Marka aad hesho habsocodka, ku tijaabi qalabka kale si aad u aragto waxa ugu fiican.
Tallaabada #5: Samee isla xisaabtan xad dhaaf ah
Ugu dambayn, laakiin maya ugu yaraan-iyo laga yaabee xitaa tallaabada ugu muhiimsan ee korriinka wadista-waa kobcinta isla xisaabtanka xad dhaafka ah ee kooxdaada dhexdeeda. Xubin kasta oo kooxeedku waa inuu ka warqabaa shaqada ay qabanayaan iyo sida ay shaqadu ugu xidhan tahay yoolalka heerka sare ah ee shirkadda. Qaybtani waxay noqon kartaa qoraal gooni ah lafteeda. Haddii aad rabto inaad si qoto dheer u quusto, Brian Balfour hagaha dhisidda kooxaha korriinka waa biblekaaga.
Xubin kasta oo kooxeedku waa inuu ka warqabaa shaqada ay qabanayaan iyo sida ay shaqadu ugu xidhan tahay yoolalka heerka sare ah ee shirkadda.
Waa kuwan soo koobid muuqaal ah oo ku saabsan wax kasta oo Brian taabto:
Waxaan raacnaa hab la mid ah si aan u kobcino lahaanshaha iyo la xisaabtanka kooxdayada oo dhan (oo ma ahan kaliya suuqgeyn). Kulamadayada bilaha ah ee kooxda, xubin kasta (oo mas'uul ka ah mashruuca) ayaa tusaya shirkadda waxa ay bilaabeen, waxa natiijadu yihiin, iyo tallaabooyinka xiga ee hore u socda.
Si la mid ah kulamadayada suuqgeyntu. Toddobaad kasta, xubin kastaa waxay la wadaagtaa tijaabooyinkii ay bilaabeen si ay u dareemaan in lagula xisaabtamayo shaqada ay qabanayaan. Habkani wuxuu kaa caawin doonaa inaad gaadho laba shay:
Markaad ku dhiirigeliso kooxdaada inay wadaagaan waxay bilaabeen iyo waxay barteen, waxaad ku dhiirigelinaysaa inay natiijooyin soo saaraan.
Haddii ay jiraan hawl-wadeenno ka hooseeya oo si tartiib tartiib ah u shaqeeya ama goosta fikrado qiimo yar, tani waxay ku riixi doontaa inay hagaajiyaan wax soo saarkooda.
Taas oo keliya ma aha, laakiin waxa kale oo aad awoodi doontaa in aad aqoonsato cidda A-ciyaaryahan ah iyo kan waxqabadkiisu hooseeyo. Tani inta badan waa baraarujin loogu talagalay kan dambe.
U diyaargarow koritaanka joogtada ah, ee la saadaalin karo
Si loo soo gabagabeeyo, ma jiraan wax sixir jabsi ah ama xabbad qalin ah oo furaysa kobaca qarxa ganacsigaaga hal habeen.
Waxay ku saabsan tahay wadista kobaca joogtada ah, kaas oo hoos ugu soo dhacaya faham xooggan oo ku saabsan xogta, diiradda aan joogsiga lahayn ee saameyn ku yeelashada cabbirrada saxda ah, iyo tijaabinta xeeladaha suuqgeynta ee kala duwan si aad u gaarto yoolalkaaga.
Ama sida ganacsadaha aan ugu jeclahay Biz Stone mar uu yiri, "Waqti, dulqaadasho, iyo toban sano oo isku day ah ayaa kaa dhigi doona mid u eg guul habeen ah."
Aditya Sheth waa suuq gaynta kobaca ee Venngage-oo ah goob naqshadeed oo dhan-in-hal ah. Marka aanu ku mashquulsanayn qorista wax qabad la taaban karo ama tijaabooyin la wado, waxaad ka heli kartaa isaga oo akhriya sheekooyin aan khayaali ahayn, baranaya xirfad cusub ama dhegaysanaya rap. Waxaad kula socon kartaa Twitter ama LinkedIn.
8 siyaabood oo aad ku kordhin karto CTR-gaaga WordPress
Sida Loo Shaandho Natiijooyinka Raadinta ee WordPress Iyada oo leh Qalabka Qalabka iyo Elementor